IXiaomi Mi MIX 4 ayizukumiselwa kulo nyaka kwimarike | I-Androidsis
Akusayi kubakho Xiaomi Mi MIX 4 njengoko uXiaomi esitsho
Kwiveki ephelileyo iXiaomi Mi MIX Alpha yaziswe ngokusesikweni, ifowuni entsha kunye emangalisayo Uhlobo lwesiTshayina. Ngaphandle kwale fowuni, uphawu lwesiTshayina kulindeleke ukuba lwenziwe yayikukubonisa iXiaomi Mi MIX 4 ngokusemthethweni. Kodwa kumnyhadala, umnxeba awuzange ufike, kwaye khange kubekho nto ikhankanyiweyo ngayo, ephakamise ukuthandabuza phakathi kwabaninzi.
Inkampani ayithethanga nto malunga nayo Singayilindela nini iXiaomi Mi MIX 4 kwintengiso. Nangona inyani kukuba le fowuni ayizukungena kwintengiso, njengoko kutyhilwe ngoku. Ubuncinci kulo nyaka asinakulindela iimodeli ezininzi ngaphakathi koluhlu lwegama laseTshayina.
Igosa lenkampani ephezulu liqinisekisile ukuba akusayi kubakho fowuni kuluhlu lweMi MIX kulo nyaka. Ke ngoko, iXiaomi Mi MIX 4 ayizukufikelela kwintengiso kulo nyaka. Nangona oko akuthethi ukuba le fowuni ayikho, sinokubona le modeli ekuqaleni konyaka olandelayo kumsitho.
Simele siyikhumbule loo nto I-Mi MIX 3 5G yaziswa ngokusemthethweni kwi-MWC 2019. Ke ngoko, ngekhe ibe yinto engaqhelekanga ukuba inkampani isishiye nomntu oza kungena kule modeli kuhlelo lonyaka olandelayo. Ukongeza, kulindeleke ukuba kuthiwe yindlalifa iya kuba ne-5G.
Ngelishwa, inkampani ayibonisanga zinkcukacha ngalo mzuzu. singayilindela nini iXiaomi Mi MIX 4. Into ebonakala icacile kukuba ifowuni ikhona okanye kukho izicwangciso zokuyivula. Kuphela ayizukwenzeka kwi-2019, njengoko uninzi lwethu lwalulindele ezi veki.
Ke siya kugxila kwiindaba ezininzi ezivela kumenzi malunga nale fowuni. I-Mi MIX Alpha yifowuni entsha, kodwa iya kuba nenkululeko encinci kwintengiso. Iya kuba yiXiaomi Mi MIX 4 emiselwe kwilizwe jikelele njengesiqhelo, njengezinye iimodeli ezikoluhlu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Akusayi kubakho Xiaomi Mi MIX 4 njengoko uXiaomi esitsho
IHuawei ityhila xa i-EMUI 10 isiza kwiifowuni zokuqala
Zenzele iipopcorn ngePopcorn Burst emnandi